Ndeapi ma Strategies, Tactics, uye Channel Vanofanira Vashambadziri Kutarisa pane muna 2017 | Martech Zone
Ini ndinotarisira kuverenga mune zvakataurwa kana munharaunda medu izvo iwe zvaunofunga nezvazvo muna 2017. Sesangano, tiri kudhonzwa munzira dzakawanda asi tarisiro yedu nevatengi inoramba iri yekukwiridzira yavo yekushambadzira mari uye nekupa kukosha mukati zvigadzirwa zvedu nemasevhisi avakaisa mairi. Mukana watinawo semuparidzi neanoshanda ndewekuti isu tinogona kuyedza zvinhu zvinopenya kuderedza chero njodzi yakazara. Kugamuchirwa nekukurumidza kwe kushambadzira tekinoroji inobatsira… asi chete kana zvine musoro.
Kuti ikubatsire kudzora tarisiro yako, tarisa MDG Kushambadzira nyowani infographic, 7 Resolutions Mamaki ese Anofanirwa Kugadzirira 2017. Iyo inosimbisa akakosha mazano uye nzira dzinofanirwa kukumisikidza zvakanaka zve gore rinouya.
Isu takatarisa rimwe gore rematarisiro edu achitambura chaizvo. Vakanga vasina bhajeti kana zvikwata kunyatsoona kugona kwavo kushambadzira. Nekuda kweizvozvo, rakawanda rebasa rakaiswa kune izvo ivo kubudirira pane kana zvavaigona kukwanisa kuchengeta misoro yavo pamusoro pemvura. Imwe metric yakakosha yatakaona isipo kubva pane yega tarisiro yaive tarisiro yezvavo yavo kushambadzira kwekudyara kunofanirwa kunge kuri sehuwandu hwemari yakawanda. Ihwo hunhu hukuru hwekudyara mubhizinesi rako izvozvi, kwete kupfuura gare gare, kuti ugone kuenderera nekukurumidza kukura kwako.
Maitiro Ekushambadzira, Matekiniki, kana maChannel eku Tarisa pane muna 2017
Vanhu vamwe nevamwe, Kwete maChannel: chete 25% yevashandi vebhizinesi vane yakazara nzira yekuyambuka-chiteshi Kutarisa nzira dzako parwendo rwevatengi vega uye maakaunti zvinokubatsira kukwidzirisa nekubatanidza ako omni-chiteshi nzira. Account-based kushambadzira (ABM) inoenderera ichityaira mazhinji eaya marongero.
kushandisa michina: 94% yevatengesi vakagadzira zvimwe zvezvirongwa zvavo vanoti zvakavandudza mashandiro ekambani yavo Nepo nzira nemazano zvichinyanya kuomarara, zviwanikwa zvekushambadzira kumakambani zviri kuwanda kushomeka. Sarudzo chete yevatengesi ndeyekutarisa kune yekushambadzira tekinoroji kubata uye kugadzirisa avo ekushambadzira marongero.
gutsikana: 58% yevanonyanya kushambadza # B2B vatengesi vane rakanyorwa zvemukati nzira yekutengesa Mabhizinesi ari kuburitsa toni yezvisingashandiswe, zvisingaonekwe, uye zvakaderera kuita zvemukati mazuva ese. Tinogona kukurudzira zvikuru kugadzira raibhurari yezvinyorwa nzira yekugadzira zvirimo.
Dhata Hutsanana: 24% yevatengesi vevatengesi 'data yevatengi haina chokwadi, paavhareji Sekuita uye kubatana kwevatengi nepamhepo zviitiko zvevatengi zvinova zvinotarisirwa nevatengi nemabhizinesi, yakaipa data ichava munzwa kudivi remakambani mazhinji. Ichi ndicho chikonzero vatengi data mapuratifomu dziri kukura mukurerwa.
Video: Paive nekuwedzera kwe20% muhuwandu hwevhidhiyo yepamhepo yakaonekwa muna2016 Vhidhiyo iri kukurumidza kuve inofarirwa zvirimo svikiro revazhinji vatengi. Kudzidza tambo dzevhidhiyo - senge sei yakachipa odhiyo inorwadza kupfuura vhidhiyo yakaipa - yakakosha sekuvheneka, kunyora, uye kureba kwevhidhiyo.
chibatiso: 29% yevatengi vese vanodzivisa zviito zvepamhepo nekuda kwekuchengetedzeka kunetsekana Trust ndechimwe chezvipingamupinyi zvakakura kumutengi kana bhizinesi kukuwana iwe online nekushandura kubva pane tarisiro kuita mutengi. Kuvimbisa zvavo data rakachengeteka uye kutaurirana nhanho iwe dzaunotora kuchengetedza kwavo zvemukati kwakakosha.
Emerging Technologies: Artificial Intelligence inofungidzirwa kuwedzera huwandu hwekukura kwehupfumi ne2035 uye Virtual chaiyo Internet traffic inofungidzirwa kuwedzera 61 nguva na2020. Aya matekinoroji ane mukana unoshamisa mukugadzirisa rwendo rwevatengi nekusimudzira ruzivo rwevatengi.
Tags: abmaccount based kushambadzirakushandisa michinachiteshi kushambadziraraibhurari yezvinyorwaContent Marketingdata yemutengihutsanana hwe datahunyanzvi hwekubudamarketing automationchibatisoVideo contentvhidhiyo kushambadzira